Kirat Rai Society of America (KRSA)
आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणमा विशेष पहल गर्नेछु
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, (फिप्ना) को निर्वाचन यही जनवरी २८ मा हुँदैछ । फिप्नाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि बाङदेल (मनकुमार राई)ले अबको नेतृत्वका लागि आप्mनो दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । उहाँ आदिवासी जनजातिका संस्थाहरुलाई दबाब दिने मात्रै नभएर धक्का दिन सक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ फिप्नाका अध्यक्षका उम्मेदवार बाङदेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले फिप्नाको अध्यक्षमा आप्mनो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तपाईंको दाबी के आधारमा सही छ ?
मलाई मेरो संस्था किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिका(KRSA)ले अध्यक्षको रुपमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । म आदिवासीहरुको हक अधिकारका लागि फिप्ना स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै लागेको व्यक्ति हुँ ।
मैले किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकमा दुई कार्यकाल बोर्ड चेयरको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेको छु । म फिप्नामा स्थापनाकालदेखि नै संलग्न हुँदै आएको छु । मैले एक कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।
म ‘सेल्फ इम्प्लोयी’ पनि हुँ । म मेरो पूर्णकाल संस्थालाई समय दिन सक्छु । मसँग धेरै योजनाहरु पनि छन् । अब हाम्रो गोरेटोलाई मूलबाटो बनाउनु पर्छ । मेरो योजना, अनुभव र निरन्तरताका साथै आदिवासीहरुको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि अध्यक्षमा मैले दाबी गरेको हुँ र यो स्वाभाविक पनि हो ।
तपाईंको मुख्य मुख्य कार्ययोजनाहरु के के छन् ?
सर्वप्रथम त म आदिवासीहरुको मुद्दामै केन्द्रीत भएर काम गर्नेछु । संसारभरिका आदिवासी जनजाति एक होऔ भन्ने मूल नारालाई सफल बनाउनका लागि आदिवासी जनजातिका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल स्थापना गर्न मरो विशेष पहल रहनेछ । हाम्रा साझा एजेण्डालाई छलफल गरी अगाडि बढाउन यसले सहयोगी भूमिका निभाउने छ ।
संस्थालाई सांगठानिक, आर्थिक र भौतिक रुपले सबल बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु ल्याउने छु । अमेरिकामा खुलेका आदिवासी संस्थाहरुलाई विधि विधान पुर्याएर प्रक्रियागत रुपमा दर्ता गराउनका लागि पनि पहल गर्नेछु । ती संस्थाहरुलाई संस्थागत रुपमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रम, गोष्ठि, सेमिनार गराई मुद्दामा केन्द्रीत गराउनेछु । साथै निःशुल्क संस्थागत टे«निङ तथा कानूनी परामर्श दिने व्यवस्था समेत गर्नेछु ।
संसारको मुटु मानिने न्यूयोर्कमा आयोजना हुने आदिवासी चलचित्र महोत्सव र ‘नेपाल डे परेड’ लाई व्यापकता दिँदै लानेछुु । आदिवासीहरुको परम्परागत ज्ञान, सिप, पहिचान र अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघसँग मिलेर गर्नका लागि मेरो ध्यान केन्द्रीत हुनेछ । अब आदिवासी जनजाति संस्थाहरुलाई दवाब दिने मात्र होइन धक्का दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । मेरो ध्यान यसतर्पm नै केन्द्रीत हुनेछ ।
अमेरिकी सरकार र जनतासँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ त ?
हामीले अहिले स्थानीय तह र सीटीसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरु सधैं हाम्रो कार्यक्रममा आउने गर्नु भएको छ । यो भनेको अमेरिकी सरकारको उपस्थिति हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । हामीले ‘लोकल पोलिटिक्स’मा पनि सहयोगी भूमिका निभाउदै आएका छौं ।
संस्थालाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउनुहुन्छ ?
हामीले अहिले विहान दशदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म नै कार्यालय खोल्ने कोसिस गरिरहेका छौं । हामी आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सिप, मातृभाषा, भेषभुषा र संस्कार संरक्षणका निम्ति सरकारी तवरबाटै बजेट जुटाउने पहल गर्छौ । विभिन्न जातजातिका भेषभुषा, भाषा, संस्कार, संस्कृति र पहिचानसम्बन्धी परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नेछौ । यसका लागि हामीले मेयर, सिटी र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौ । ती सरकारी कार्यलयबाट हामीलाई परियोजना सञ्चालन गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु । हामीलाई प्राप्त भएको परियोजनाहरु हामी सबै जातीय संस्थाहरुसँग मिलेर सञ्चालन गर्नेछौ । यसले हामीलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
Thank you for becoming new member, renewing membership of KRSA annual year 2015-2016, and Lifetime Member.
5. Sunita Rai, NY
6. Prem Rai, NY
7. Hem K. Rai, NY
8. Niraj Rai, MD
9. Usha Rai, NY
10. Kokila Dewan, NY
11. DilKeshar Rai, NY
12. Melina Rai, NY
13. Diwas Koyu Rai, CO
14. Shakuntala Chamling, NY
15. Megh Nath Rai, NY
16. Pradeep Bunglawa Rai, NY
17. Bijay Kumar Rai, NY
18. Lobsang C. Sherpa, NY
19. Sumita Phago Rai, NY
20. Jas Kumar Rai, NY
21. Devindra K. Mukhiya, NY
22. Sophin Rai, NY
2. Ratna Koyu Rai, CO
4. Samir Rai, NY
5. Sanchit Rai, NY
6. Sarmila Rai, NY
7. Prabha Onem, NY
8. Ashok Rai, NY
9. Dr. Bhabi Rai, WA
10. Dr. Bimla Rai, WA
11. Harka Rai, NY
12. Dipa Rai, NY
13. Deepak Kulung Rai, CO
14. Dhan Rai, CO
15. San Bahadur Rai, CO
16. Chandra Kala Rai, CO
17. Sita Dahal Rai, CO
18. Purna Kumari Rai, CO
19. Suren Rai, CO
20. Neetu Khapung, KY
21. Kiran Khapung, KY
1. Surendra Rai, NY
2. Chandra Kumar Rai, CO
3. Binod Rai, CO
4. Khagendra Rai, NY
5. Chandra “Akash” Rai, CO
6. Dr. Navin Kumar Rai
7. Dr. Kalyani Rai, WI
8. Pramod Thulung, NY
9. Ranjeep Rai, NY
10. Thaneswor Rai, NY
11. Mani Bangdel, NY
12. Nila Rai, NY
13. Dr. Sandhya Rai-Sherpa, CO
14. Ganesh Kumari Rai, KY
15. Bishnu Maya Thapa-Rai
16. Ram Kumar Rai, NY
17. Bharati Rai, NY
18. Pratap Rai, NY
19. Umesh Rai, NY
20. Bimal Rai, NY
21. Rajan Rai, NY
22. Bhupendra Ra, NY
23. Bhim “Tshitiz” Rai, CO
24. Bhawani Rai , NY
25. Aita Singh Rai, CO
26. Jiden Rai, CO
Date: May 21 and 22, 2016
Detail will be updated.
- KRSA Executive Committee
Sakela Udhauli Celebration
Inauguration KRSA General Meeting 2007 Kirat in US Military CO Sakewa 2009 KRSA History NY Sakewa 2009